အော်ဒီ S6 ဇိမ်ခံ ဆလွန်း ရတော့မည် - အမျိုးကောင်းသား
Home » Information » အော်ဒီ S6 ဇိမ်ခံ ဆလွန်း ရတော့မည်
အော်ဒီ S6 ဇိမ်ခံ ဆလွန်း ရတော့မည်
Audi မှ ၂၀၁၃ မော်ဒယ် S6 ပြီးနောက် ယခုထပ်မံပြီး ၂၀၁၄ မော်ဒယ် S6 ကို ဆက်လက်
ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ S6မှာတော့ Front Engine နဲ့ Audiရဲ့နာမည်ကျော် Quattro လေး ဘီး
ယက်စနစ်သုံး ဖြစ်ပြီး မြင်းကောင်ရေအား ၄၂၀ ထိထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မယ့် ၄.၀ လီတာဆန့်
TwinTurbocharged ဆလင်ဒါ ၈လုံးVအင်ဂျင်အမျိုးအစားကို ထည့်သွင်း အသုံးပြု ထားပါတယ်။
အင်ဂျင်ကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုDual-Clutch အော်တိုဂီယာ ၇ချက်ကနေတစ်ဆင့်
ကားဘီးလေးဘီးဆီသို့ စွမ်းအင်တွေ ပို့လွှတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃.၇ စက္ကန့် အတွင်း သုညမိုင် ကနေ
တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ နှုန်း အထိ အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ပြီး Top Speedကတော့ တစ်နာရီ မိုင် ၁၅၅မိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီစားနှုန်းမှာတော့ မြို့တွင်း တစ်ဂါလံ မိုင် ၁၇ မိုင်နှုန်း နှင့် အဝေးပြေးလမ်း မှာတော့ တစ်ဂါလံ မိုင် ၂၉
မိုင်နှုန်း ထိပြေးဆွဲ နိုင်ပြီး စုစုပေါင်းဆို ရင်တော့ တစ်ဂါလံ မိုင် ၂၀ နှုန်း ထိ
အသုံးပြုမောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ www.audi.com မှာ S6 ကို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၄မော်ဒယ် S6 ဆီဒန်စပို့စ် ကားသစ်မှာ လုံခြုံရေးစနစ်အတွက် အဆင့်မြှင့် အသက် ကယ်လေအိတ်
၆လုံးထည့်သွင်းထားပြီးOption ပိုင်းအနေဖြင့် ၂လုံးထပ်မံ ထည့်သွင်း နိုင်ပါသေးတယ်။
ကားရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်လူငါးယောက်လုံလုံလောက်လောက်စီးနှင်းနိုင်အောင်ကျယ်ဝန်းပြီး ခေတ်မီလှပတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ၊ အဆင့်မြင့်ကောင်းမွန်လှတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အတူ Power Seat ၊ Leather Seat ၊ Heated Seat တွေပါ ပါဝင်မှာဖြစ်လို့ အသုံးပြုစီးနှင်း သူတွေအဖို့ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ
၀ရှိစေမယ့် S6 ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ရောင်းချတဲ့ Audi S6 ကို ဒီ လခ့်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ http://www.audiusa.com/models/audi-s6 ၂၀၁၄ Audi S6 Quattro စပို့စ်ဆီဒန်ကားလေးမှာ အဆင့်မြင့် Prestige Trim Level တစ်ခု သာပါဝင်ပြီး
အခြေခံဈေးနှုန်းအနေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃,၄၀၀ သတ်မှတ်ထား တယ်လို့သိရှိရပြီး Driver
Assistance Package ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ၊ Innovation Package ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၅,၆၅၀ ထပ်မံပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ အဓိကပြိုင်ဘက်တွေကတော့ 2014 Porsche Panamera နဲ့
2014 Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic တို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုလည်း Audi နောက်ဆုံးပေါ်တွေ ရောက်ရှိ ပါတယ်။ http://www.motors.com.mm/cars/audi/ မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့လို့ပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မော်ဒယ်တွေပါ ရောက်ရှိ ပါတယ်။ ဈေးကတော့ ပြန်လှန်အောင် ကြီးနေမှာပါ။
စာဖတ်သူတို့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ နိုင် ပါတယ်။
ပြန်လည်တင်ပြသူ Myanmar IT Helper အချိန် 4:01:00 PM
အပေါ်က ကြော်ငြာလေးတွေကို အဆင်ပြေရင် ကလစ် ပေးခြင်းဖြစ်ကူညီပါ ခင်ဗျာ
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ တောင်းဆုပြုလျှက် အမျိုးကောင်းသား
Avira License key
Interne Fast Speed
Premium Account s
အမျိုးကောင်းသား. Powered by Blogger.
Like ခြင်းဖြစ် အားပေးပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Developed By (အမျိုးကောင်းသား)
Folder Lock v7.2.2 For Pc
6လပိုင်း 21ရက်နေ့Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် စမ်းကြည့်တာအဆင်ပြေပါတယ် ဒါလေးကတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ အခု ဗားရှင်းမှာ ၀င်းဒု...
မည်သည့် Android ဗားရှင်းမဆို စာကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် :) အရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ် မိမိဖုန်းထဲမှာ ကျနော့်ဖောင့်လေးကို ထည့်ပေးထားယံ...
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကို မျှဝေပေးခြင်တာက သံပုရာသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ အကျိုးရှိပုံ တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Windows 10 & Office 2016 All Editions Activator 1.8MB
ဒါကတော့ Windows လိုင်စင် အခက်ခဲရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း သေးသေးလေးဆိုတော့ အခုမလိုသေးရင်တောင် ကွန်ပျ...
LG Phone Firmware All Lg Stock Firmware
ကိုယ်လိုတဲ့ မော်ဒယ်တာ ရွှေးပီးဒေါင်းပေတော့ တစ်ခုချင်းတင်ရင် အလုပ်ရှုပ်တယ် :) http://adf.ly/1Z6KKR
TeamViewer 8.0.19045 Portable 9MB+ အသုံးပြုနည်း PDF
Teamviewer ဆို ကောင်းကောင်းသိကြမှာပါ ကိုယ်ကွန်ပျူတာကနေ အခြား ကွန်ပျူတာကို Teamviewerနဲ့ ချိတ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ် အသုံးပြုတဲ့ သ...
Cam×264.MP3 Source အသစ်နဲ့ Red2Movie ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ ရပြီ.. [1.8GB & 300MB in GoodCamMKV]
လာပါပြီဗျာ Red2Movie ပါ.. US မှာ 19,July,2013 တုန်းက ရုံတင်သွားတဲ့ ကောင်လေးပါ... ပျိုတို့ ကြိုက် မင်းသား လီဗျောင်ဟွန်း ပါဝင်သရုပ် ဆေ...
Blog လုပ်နည်း (ဇွဲကပင်မြေ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
1. မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyi ( fount) တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyi Font ...
​ဆေး​လောကဟာသ ​ဒေါက်​တာစိုးလွင်​ PDF 10MB
ဆေးလောကမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ ဟာသဇတ်လမ်းလေးတွေပါ Download>>> mediafire
Samsung Galaxy J3 SM-J320H Region MYM Firmware
Galaxy J3 SM-J320H လိုအပ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ ယူလို့ရအောင်လို့ MYM Region လေးတင်ပေးလိုက်တယ် Download>>> d-h.st
Android Devices တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Music Player ...
Ontrack EasyRecovery Enterprise V11.0.2.0 incl Cra...
အောင်လ(Reason) - ပင်လယ်ထဲကမြစ်များ (2014) [Album]
Power ISO V5.9 + Patch (5.72 MB)
Anti Virus Hacker [ E-book Myanmar Version]
အခြားလူတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့နေရာကို သိနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်...
Android ဖုန်း/tablet တွေအတွက် MMComplex လို့ ခေါ်တဲ...
Cyberlink PowerDVD Ultra 14.0.3917.58 + crack
Getjar Rewards ( Paid Apps for Free) v4.3.1 apk f...
iphone, ipad, ipod touch တွေမှာ Cydia icon ပျောက်သ...
ခင်ကြီး - အလိုက်တသိ(2014)[Album]
VA – မာစတာလက်ရွေးစင်သီချင်းများ2014(2014)[Album]
သူရိန် (The Real) - We R Rockers(2014)[Album]MP3-1...
ဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲ Facebook ကို 100% အလွယ်ဖွင့်နည်း...
DJ Swan Thu - ဒိုးကလေးနဲ့ကဲမယ်(2014)[Album]
သားစိုး - ရောသမပေါင်းချုပ်(2014)[Album]MP3-128Kbps...
Copyright © 2012 အမျိုးကောင်းသား All Right Reserved